लिकर बेसिक्स-कम्पनी समाचार-गोलोंग लिकर (समूह)
व्हिस्की: मूल कुरा
व्हिस्की एक आत्मा हो, जुन काठको उमेर हो, दानाको किण्वित म्यासको आसवबाट प्राप्त। व्हिस्की चार देशहरूमा उत्पादन गरिन्छ: संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, स्कटल्यान्ड, र आयरल्यान्ड। क्यानाडा, आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डमा उत्पादन हुने ह्विस्कीले उनीहरूको देशको नाम लिन्छ। ह्विस्की अन्य देशहरूमा उत्पादन गरिन्छ, यद्यपि उनीहरूले यस्तै स्वाद लिन सक्दछन्, कानुनी रूपमा क्यानाडीयन, आयरिश, वा स्कट्च भन्न सकिदैन।
ह्विस्कीहरू मदिराको बलमा भिन्न हुन्छन्, ११० प्रुफ अमेरिकन बोतल बोन्ड व्हिस्कीबाट 110० प्रूफ क्यानाडाली व्हिस्कीसम्म, क्यानाडामा मात्र बिक्री गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बेच्ने धेरै जसो व्हिस्कीहरू या त 70 ​​86 वा proof० प्रुफ हुन्छन्, डिस्टिलर र ब्राण्डको आधारमा। १ 80 s० को दशक भन्दा पहिले, धेरै व्हिस्कीहरू उच्च प्रमाणमा बोतल थिए। आज, आधुनिक पिउनेहरूले हल्का चाख्ने ह्विस्कीहरू मन पराउँछन्। संघीय कानून को लागी प्रत्येक बोतल मा लेबल स्पष्ट रक्सी को प्रमाण संग मार्क गर्नु पर्छ।
प्रुफ भनेको के हो?
प्रमाण: कुनै पनि आसुतमा रक्सीको मात्रा, र भोल्यूमले percent० प्रतिशत रक्सीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। आधा रक्सी र आधा पानीको मिश्रण 50 प्रुफ वा percent० प्रतिशत रक्सीको रूपमा स्कोर छ।
शब्द "प्रमाण" आसवनको अग्रगामी युगबाट बाहिर आयो। सुरुमा, तरवारहरूको शक्ति निर्धारण गर्न, डिस्टिलरहरूले समान मात्रामा आत्मा र गनपाउडर मिश्रण गर्थे र त्यसपछि मिश्रणमा ज्वाला लगाउँथे। यदि बन्दुक जलाउन असफल भयो भने, भावना धेरै कमजोर थियो; यदि यो धेरै उज्जवल जलायो भने, यो धेरै शक्तिशाली थियो। जे होस्, यदि यो एकै निलो ज्वालाको साथ समान रूपमा जलाइएको छ भने, यो प्रमाणित भएको भनिन्छ। त्यसैले शब्द प्रमाण।
शुद्ध मदिरा, जस्तै प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग गरिएको, २०० प्रमाण हो, १०० रक्सीको। आधा रक्सी र आधा पानीको मिश्रण 200 प्रुफ वा percent० प्रतिशत रक्सीको रूपमा स्कोर हुन्छ। प्रमाण एक मादक शक्ति को एक उपाय हो, गुणवत्ता को आवश्यक छैन।
ब्रान्डी: मूल कुरा
ब्रान्डी एक अयोग्य आत्मा हो, अंगूर वा अन्य फलको किण्वित म्यासबाट आसुत। धेरै ब्रान्डी वाइनबाट आसुत छ। सेतो दाखमद्य, सेतो अ gra्गुरबाट बनेको, प्राय जसो प्रयोग गरिन्छ। वाइनले भर्खरै आफ्नो किण्वन प्रक्रिया समाप्त गरिसकेपछि उत्तम ब्राण्डी बनाउँछ। एक वृद्ध वाइन, यो राम्रो गुणवत्ता को हो भने पनि, एक राम्रो ब्राण्डी छैन।
जहाँ अpes्गुरहरू हुर्कन्छन् त्यहाँ ब्रान्डिहरू उत्पादन गरिन्छ।
कोग्नाक: सबै ब्रान्डिजमा सबैभन्दा प्रसिद्ध
कोग्नाकलाई अझ विशेष रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ किनकि यो सबै ब्रान्डिजहरूमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यो फ्रान्सको कोग्नाक क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ जुन बोर्डेक्सको उत्तरी क्षेत्र हो र अटलान्टिक महासागरको सिमानामा पर्छ र यसको केन्द्र नजिकै कोग्नाक शहर छ। यस क्षेत्रलाई सात जिल्लामा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक जिल्लामा बनेको कोनाकको गुणस्तरको आधारमा। क्रममा, ती हुन्: ग्रान्डे शैम्पेन, पेटाइट शैम्पेन, बोर्डरिज, फिन, बोइस, बन्स बोइस, बोइस अर्डिनेनरीहरू, र बोइस ए टेरियर।
यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सबै कोग्नाक ब्रांडी हो, तर सबै ब्रान्डी कोग्नाक हुँदैन।
ब्रान्डिलाई केवल कोग्नाक भन्न सकिन्छ यदि यो फ्रान्सको क्यारेन्टी र चरेन्ते इन्फेरियर डिपार्टमेन्टहरूको कानुनी सीमा भित्र बढ्ने अpes्गुरबाट बनेको दाखमद्यबाट आसुत छ। यी बाहेक अरू वाइनबाट आसुत ब्रान्डिहरू कानूनी रूपमा कोग्नाक नामको हकदार हुँदैनन्, यद्यपि उनीहरू कोग्नाक शहरबाट पठाइन्छन्।
भोदका: मूल कुरा
ह्विस्की जस्तै, भोडका अन्नको किण्वित म्यासबाट डिस्टिल गरिन्छ, तर तिनीहरू आस्टिलेसनको विधिहरूमा फरक छन्। व्हिस्की स्वाद कायम राख्न कम प्रुफमा आसुत छ। भोडका तथापि, १ 190 ० वा माथिको उच्च प्रुफमा आसुत छ, र सबै स्वाद हटाउनको लागि अझ प्रशोधन गरिएको छ। धेरै अमेरिकी डिस्टिलरहरू सक्रिय भोजकोल मार्फत उनीहरूको भोडका फिल्टर गर्छन्। साथै, व्हिस्की बुढो भइसकेको छ, र भोड्का छैन।
यो केबाट बनेको छ?
केही भोडका आलुबाट बनेका छन्। धेरै भोड्का छैन। लगभग सबै भोडका अन्नबाट बनेको हुन्छ, जसमा सब भन्दा साधारण मकै, राई र गहुँ हुन्छ। त्यहाँ धेरै देशहरू छन् जुन उनीहरूले भोडाका आविष्कार गरेको दावी गर्छन्, जसमध्ये पोल्याण्ड र रसिया छन्। केही इतिहासकारहरू भन्छन् कि पोलहरूले 8th औं शताब्दीको प्रारम्भमा औषधीको रूपमा प्रयोगको लागि यसलाई उत्पादन गरिरहेका थिए। यो १ the औं शताब्दी ईस्वीसम्म थिएन, पोल र रूसी दुबैले यसलाई हरेक दिन पिइरहेका थिए।
अघिल्लो: गोलोंग ह्विस्की ककटेल रेसिपीहरू
अर्को: लिकर ग्लासवेयर प्रकारहरू